Hoggaamiyaha Hong Kong oo difaacday sharciga ammaanka uu Shiinaha soo wado – Radio Baidoa
Hoggaamiyaha Hong Kong Carrie Lam ayaa sheegtay waddamada shisheeye “inuu boos uga bannaaneen” iney soo farageliyaan sharciga ammaanka uu Shiinaha qorsheynayo ee quseeya arrimaha ammaanka gudaha dalka Shiinaha.
Dabayaaqadi toddobaadki hore, waxaa waddooyinka Hong Kong ku soo laabtay mudaharaadyo hor leh oo ay ugu dambeysay sanadki hore, booliskuna si ay dadka mudaharaadayaasha u kala eryaan ay adeegsadeen sunta indhaha ka ilmeysiisay.
Sharcigu ma aha mid weli dhaqangalay balse wuxuu haatan marayaa heer qorshe oo ay ugu magac dareen “go’aan qabya ah”, wuxuuse dhaqan galayaa marka uu u codeeyo kalfadhiga baarlamaanka dalka Shiinaha oo toddobaadkan dhacaya.
Marka haddii sharcigaasi cod lagu meel mariyo, wuxuu Hong Kong ka dhaqan galayaa bisha June.
Sharciga oo weli qabya ah oo aan weli dhaqan gelin ayaa caalamka kala kulmay cambaareyn xooggan, balse shirka jaraa’id ee toddobaadlaha oo ay qabatay Ms Lam waxay sheegtay waddamada shisheeye “inuu boos uga bannaaneen iney soo farageliyaan arrimaha socda”.
Ma jiro dal u dulqaadan kara yeelashada sharci amniga qaran ee khaldan, ayey tiri waxayna intaa ku dartay Hong Kong waxay ka tirsan tahay China marka dadlalka kale ee caalamka ka jirana kama duwana.
Hong Kong waxaa sanadki hore hareeyey mudaharaadyo rabshada wata oo bilooyin socday, iyada oo ay mudaharaadayaasha ku dalbanayaan xorriyado dimuqraadiyadeed oo dheeraad ah in lasiiyo shacabka Hong Kong.
Dhageyso faah fahino kasoo baxaya Dagaal udhaxeeya ciidamada Dowlada oo kasocda gudaha iyo duleedka m/muqdisho.
Tirada dadka laga heley cudurka corona virus ee gudaha somaaliland oo korortey .